होक्काइडो मेमा मौसम! तापमान, वर्षा, कपडा - Best of Japan
यो वसन्त परिदृश्य हो, स्यापोरो शहर होक्काइडो पार्कको नहरको वरिपरि हिंड्नेहरू र हिंड्नेहरूका मैदा वन पार्क।
यस पृष्ठमा, म होइकाइडो मौसमलाई मइमा परिचय गर्ने छु। यस समयमा, पूर्ण-स्प्रि spring वसन्त होक्काइडोमा आउँदछ। चेरी फूलहरू टोकियो भन्दा एक महिना पछि खिलिन्छन् र त्यसपछि रूखहरू अचम्मको ताजा हरियोमा परिणत हुन्छन्। तपाईं रमणीय मौसमको साथ सुन्दर पर्यटन क्षेत्रहरूको अन्वेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यो लेखले होकाइडोको मे महिनाको मौसम कल्पना गर्न तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउन धेरै चित्रहरू समावेश गर्दछ, त्यसैले कृपया उनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
तल मे टोकियो र ओसाकाको मौसम बारे लेखहरू छन्। टोक्यो र ओसाकासँग होक्काइडो भन्दा भिन्न मौसम अवस्था छ, त्यसैले कृपया सावधान हुनुहोस्।
प्रश्न र उत्तर मेमा होक्काइडोको बारेमा
मेमा होक्काइडोमा मौसम (अवलोकन)
होकाइदो मे महिनाको सुरूमा मौसम
होक्काइडो मेको बीचमा मौसम
मेको अन्तमा होक्काइडो मौसम
के होक्काइडोमा मेमा हिउँ पर्दछ?
मेमा होक्काइडोमा कुनै हिउँ छैन। जे होस्, केहि ठूला स्की रिसोर्ट्स जस्तै Niseko मा, तपाईं लगभग मे about सम्म स्की गर्न सक्नुहुन्छ।
मेमा होक्काइडो कत्ति चिसो छ?
होक्काइडोको मेमामा वसन्त मौसम छ। तपाईं आराम संग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
होक्काइडोमा हामीले कस्तो किसिमको लुगा लगाउनु पर्छ?
वसन्त कपडा मे मा वांछनीय छन्। जापानमा वसन्तका लुगाहरूका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ जाडो हिउँदार परिदृश्यको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने जनवरी र फेब्रुअरी उत्तम महिनाहरू हुन्। यदि तपाईं सुन्दर फूलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने जुलाई र अगस्त सिफारिस गरिन्छ।
मेको प्रारम्भमा तपाईले होक्काइडोमा चेरी फूलहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
मेमा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
ग्राफ: मेमा मा होक्काइडो (सप्पोरो) मा तापमान परिवर्तन
तपाईंले माथिको ग्राफबाट देख्न सक्नुहुन्छ, मेको अन्तमा, होक्काइडोमा दिनको अधिकतम तापमान करीव २० डिग्री सेल्सियस बढ्नेछ।
Biei, होक्काइडो = Shutterstock बाट डाईत्सुत्सुजनका पहाडहरू
मेमा होक्काइडोमा अधिकतम दिनको तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी बढ्छ। यो मध्यम वर्षा र प्रत्येक वर्षा संग रूखहरू र घाँस बढ्नेछ। होकाइडोमा यात्रा गर्नको लागि मे एक उत्तम समय हो।
अर्कोतर्फ, बिहान र साँझको कम तापमान एकदम कम छ। टोक्यो र ओसाकाको तुलनामा होक्काइडोको प्रति दिन तापमानमा ठूलो भिन्नता छ।
यो मेमा होक्काइडोमा अब हिउँ पर्ने छैन। यस समयमा हिउँको आनन्द लिन गाह्रो हुन सक्छ। स्की क्षेत्रहरू, निसेको र डेइसेत्सुजनमा पनि, मे around को आसपास बन्द हुनेछ। यसको सट्टामा, तपाईं असाहिकावा वा बिएइमा डाईत्सुजन पहाडी क्षेत्र नजिकै हिउँले ढाकेको पहाडहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
तल होक्काइडोको मौसम तथ्यांक तल जापान मौसम विज्ञप्ति द्वारा मेमा जारी गरिएको थियो। कृपया तपाइँको यात्राको लागि तयारी गर्दा यसलाई सन्दर्भित गर्नुहोस्।
जाडो (विशेष गरी डिसेम्बर, जनवरी र फेब्रुअरी) र ग्रीष्म (जुलाई र अगस्ट) मा आउने पर्यटक संख्या होक्काइडोमा छ। जे होस्, होक्काइडो मे र जूनमा पनि धेरै सुन्दर छ। यस समयमा अपेक्षाकृत कम पर्यटकहरूको साथ, तपाईं पूर्णतया भव्य वसन्त दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। सामग्रीको तालिकासप्पोरो तकाइकाआशाहिकावाबीआईओबिहिरो कुशिरो ...
होक्काइडोमा मौसम डेटा (मेको प्रारम्भमा)
साप्पोरो २.15.9..6.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.19.3..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.15.1..6.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.22.6..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.15.9..3.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.1mm (0 सेमी)
Biei २.15.4..2.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.7mm (0 सेमी)
फुरानो २.16.0..3.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 25.1mm (0 सेमी)
Wakkanai २.10.5..4.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.22.1..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.13.0..3.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 19.8mm (1 सेमी)
उटोरो २.12.8..3.3 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 37.4mm (3 सेमी)
नेमुरो २.10.5..3.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 31.3mm (0 सेमी)
Kushiro २.11.0..3.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 37.4mm (0 सेमी)
ओबिहिरो २.16.5..4.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 25.1mm (1 सेमी)
Hakodate २.15.4..6.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) .31.2१.२ मिमी (- सेमी)
MAY १, २०१ H होक्काइडो मन्दिर सप्पोरोमा अवस्थित शिन्टो मन्दिर हो। Maruyama पार्क मा राखिएको, होक्काइडो = शटरस्टक
सप्पोरो र हाकोडाटेमा, चेरी ब्लास्म्स अप्रिलको अन्तदेखि मेको शुरुवातसम्म पूर्ण रूपमा देखिन्छ। चेरी फूलहरू हेर्नको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय ठाउँहरू मारुयामा पार्क र सप्पोरोमा होक्काइडो तीर्थहरू हुन्। हाकोडाटेमा गोरिओकाकू पनि लोकप्रिय छ।
मेको प्रारम्भमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4:२:24 र सूर्यास्त समय १ about::18० हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोको नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :4:०06 हो र सूर्यास्त समय १ 18:२:23 तिर हो।
होक्काइडोमा मौसम डेटा (मेको मध्य)
साप्पोरो २.17.3..8.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.17.4..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.16.5..7.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.15.4..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.17.7..5.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.20.6..XNUMX मिमी (-)
Biei २.17.2..4.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.6mm (0 सेमी)
फुरानो २.17.7..5.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 18.3mm (0 सेमी)
Wakkanai २.12.1..6.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.3..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.14.4..5.5 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 19.5mm (0 सेमी)
उटोरो २.14.4..4.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 31.5mm (1 सेमी)
नेमुरो २.11.7..4.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 35.0mm (1 सेमी)
Kushiro २.12.0..5.0 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 34.4mm (0 सेमी)
ओबिहिरो २.17.7..5.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 27.4mm (0 सेमी)
Hakodate २.16.3..7.4 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.23.2..XNUMX मिमी (-)
मे ११, २०१11,2018: पर्यटकहरूले गुलाबी काई फूलको मैदानको वरिपरि फोटो लिन्छन् (जापानीनेस शिबाजाकुरा भन्छन्) टाकीनो पार्क, मोम्बेत्सु, होक्काइडोमा पहाडीमा गुलाबी कार्पेट जस्तै खिलिरहेका छन् = शटरस्टक
होक्काइडोको तापक्रम मेमा बढ्नेछ। मध्य मेमा, अधिकतम तापमान २ degrees डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन सक्छ।
अधिकतम डेटाइम तापमान धेरै परिवर्तन हुँदैन, टोकियो जस्तै। यद्यपि होक्काइडो बढी सहज छ किनकि यो सुख्खा छ।
होक्काइडोमा, बिहान र बेलुका चिसो छ। यो बिन्दु टोकियो भन्दा धेरै फरक छ। यदि तपाईं बिहान वा साँझ बाहिर जानुहुन्छ भने, तपाई उफ्रिने जम्पर वा अन्य कपडाका चीजहरू तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।
मेको मध्यमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4:१२ र सूर्यास्त समय १ 12::18१ हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोको नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :3:०54 हो र सूर्यास्त समय १ 18:२:34 तिर हो।
होक्काइडो मा मौसम डाटा (लेट मे)
साप्पोरो २.18.7..9.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.16.4..XNUMX मिमी (-)
ओटारु २.17.5..8.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.18.1..XNUMX मिमी (-)
Asahikawa २.19.5..7.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.21.1..XNUMX मिमी (-)
Biei २.19.1..5.8 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 22.5mm (0 सेमी)
फुरानो २.19.8..7.6 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 23.2mm (0 सेमी)
Wakkanai २.13.4..7.2 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.27.3..XNUMX मिमी (-)
अबाशिरी २.15.2..6.7 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.22.4..XNUMX मिमी (-)
उटोरो २.15.7..6.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) 31.9mm (0 सेमी)
नेमुरो २.12.2..5.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.35.8..XNUMX मिमी (-)
Kushiro २.12.8..6.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.40.2..XNUMX मिमी (-)
ओबिहिरो २.18.5..7.1 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.28.6..XNUMX मिमी (-)
Hakodate २.17.6..8.9 ℃ (१.XNUMX..XNUMX ℃) २.29.2..XNUMX मिमी (-)
मे २ 23, २०१ 2015: टाकिकावा रापसीड उत्सव क्यानोला फूलका क्षेत्रहरूको प्रशंसा गर्ने उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो। यो बाली रोटेशन, टाकिकावा, होक्काइडो = शटरस्टकको रूपमा रोपिएको छ
मे २०, २०१20,2017: आमा र छोरा ट्रेन रेल पृष्ठभूमि, ओतारु, होक्काइडोको साथ घर फर्कदै
यस समयमा होक्काइडो साँच्चै सहज छ। विशाल मैदानहरूमा सुन्दर फूलहरू फूलेको छ।
टाकिकावा शहरमा, सप्पोरोबाट ट्रेनको झन्डै minutes० मिनेटमा, फ्लावर फेस्टिवल मेको बीचदेखि जुनको सुरूमा आयोजित हुनेछ। बलात्कार फूलहरूको क्षेत्र धेरै सुन्दर छन्।
मेको अन्तमा, सप्पोरोमा सूर्योदय समय करीव :4:०03 हुन्छ र सूर्यास्त समय १ :19: १। हुन्छ।
पूर्वी होक्काइडोको नेमुरोमा सूर्योदय समय करीव :3:०45 हो र सूर्यास्त समय १ 18:२:45 तिर हो।